PROJEKT BIRMA 2015
Computer animation for civic education in Shan State
PROJEKT BIRMA 2014
VOICE OF SOCIAL CHANGE : POLAND 1989 MYANMAR 2015
Electoral Poster Competition 2014 – Photo Gallery
Local Civic Committees in Shan State
Initiatives of Local Civic Committees – Shan state
PROJEKT BIRMA 2013
“Together for Burma: Civic Education 2013” in Rakhine
“Modern Education” programme. Photos
Rakhine Educators come together to promote active methods of participation
“Together for Burma: Civic Education 2013” in Shan
Electoral Education and TOT
What’s the recipe to create one of the first electoral handbooks before 2015 elections? Photos
45% of people in Shan State don’t know how to vote – results of the electoral survey
Local organisations working together for electoral education in Shan and Kayah states
“Voice of Social Change” – how to bring activists and educators from different regions of Myanmar to discuss local education and find common solutions
PROJEKT BIRMA 2012 – Rakhine state
O Arakanie / About Rakhaing State
Youth working towards peace in Rakhine State
First day of “Civic Skills Workshop”
Apel trenerów “Liderów Transformacji” o pomoc Birmie w “Gazecie Wyborczej” / “Transformation Leaders” trainers call to help Burma in “Gazeta Wyborcza”
projekt “Liderzy Transformacji”, zdjecia z Arakanu/ “Transformation Leaders” project, photos from Rakhaine State
PROJEKT BIRMA 2012 – SHAN STATE
O regionie Szan / About Shan State
“Civic College” graduates organiseadebate at Taunggyi University
“Birma się budzi” – wywiad z Khun Saw Aungiem w refugee.pl / “Burma is waking up” interview with Khun Saw Aung in refugee.pl
Działacze z Birmy spotkali się ze studentami UJ / Activists from Burma met with the students from Jagiellonian University
SOLIDARNOŚĆ POLSKO – BIRMAŃSKA ZAPRASZA NA DWA SPOTKANIA OTWARTE Z KHUN SAW AUNGIEM I KHUN KHIT SANEM, DZIAŁACZAMI Z MNIEJSZOŚCI PA-OH Z BIRMY.
“Civic College” closing ceremony – Taunggyi, “Young Democracy” project
About Projekt Birma / မိတ်ဆက် / 中国的
Projekt Birma isaprogramme implemented in Burma/ Myanmar by the Other Space Foundation in co-operation with Polish Burma Solidarity. The programme aims to support and mobilise grass-roots organisations from ethnic minorities in the establishment of the civil society.
The programme was established in 2012. Between April and December 2012 two civic education projects were conducted in Shan state (see: Young Democracy project) and Rakhine state (see: Transformation Leaders project). Both projects were funded with the support from the Programme “Support for Democracy” co-financed by the Polish Development Programme of the ministry of Foreign Affairs of the Republic of Poland
In 2013, the programme was continued in Shan and Rakhine states (see: “Together for Burma: Civic Education” project).
In 2014, we focused onanumber of issues including access to justice for women, electoral education and sharing the experience of Polish transformation with Burma/Myanmar (find out more about our activities in 2014 here).
In 2015, we continue to work with various regional groups, developing innovative approach to civic education, human rights and democratisation. Depending on local partner organisations, our main focus are issues such as electoral education and monitoring, computer animation for civic education, land-related issues, environmental conservation, women rights, indigenous rights (find out more about our activities in 2015 here).
The guiding principle of Projekt Birma is the conviction that local activists should playadecisive role in the creation and implementation of the projects we support.
ဤ “ဗမာပြည်စီမံချက်” အင်တာနက် စာမျက်နှာတွင် ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် အတွင်း မကြာသေးမီက အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ခဲ့သော မရင့်ကျက်သေးသည့် ဒီမိုကရေစီစနစ် စီမံချက်နှင့် အသွင်ကူးပြောင်းမှုဆိုင်ရာ ခေါင်းဆောင်မှု သင်တန်းစီမံချက်တို့နှင့် စပ်လျဉ်းသော သတင်း အချက်အလက်များကို ဖော်ပြထားပါသည်။ အဆိုပါ စီမံချက်တို့၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ မြန်မာနိုင်ငံ ဒေသ အသီးသီးတွင် မှီတင်း နေထိုင်ကြကုန်သော လူငယ် လူရွယ် တို့ကို ဒီမိုကရေစီ၊ လူ့အခွင့်အရေး၊ မတူကွဲပြား ခြားနားသော ဓလေ့ထုံးတမ်း ယဉ်ကျေးမှုဝါဒတို့အား အသိအမှတ်ပြု တန်ဖိုး ထားတတ်စေရန် လေ့ကျင့်ပျိုးထောင်ရန် ဖြစ်ပါသည်။ မရင့်ကျက်သေးသည့် ဒီမိုကရေစီစနစ် စီမံချက်ကို ပိုလန်-မြန်မာ သွေးစည်းရေးအဖွဲ့က ကမကထပြု၍ ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်ပြီး စီမံချက်လုပ်ငန်းစဉ်များကို ရှမ်းပြည်နယ်တွင် အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်လျက် ရှိပါသည်။ အသွင် ကူးပြောင်းမှု ဆိုင်ရာ ခေါင်းဆောင်မှု သင်တန်းစီမံချက်ကိုမူ Other Space Foundation က ကမကထပြု၍ ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်ပြီး စီမံချက်လုပ်ငန်းစဉ်များကို ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်လျက် ရှိပါသည်။ ဤစီမံချက်တို့၏ ရည်မှန်းချက်မှာ မြန်မာ လူငယ်လူရွယ်တို့အား ဒေသတွင်းရှိ ထုံးတမ်းဓလေ့များနှင့် ကိုက်ညီမှုရှိသော လူထုအခြေပြု အဖွဲ့အစည်းများ ပေါ်ထွန်းလာစေရန် ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ရာတွင် တက်ကြွစွာ ဆောင်ရွက်ခွင့် ရရှိရေးအတွက် လိုအပ်သော စွမ်းရည်များကို ဖြည့်တင်း မြှင့်တင်ပေးရန် ဖြစ်ပါသည်။ ထို့မျှသာမက စီမံချက်ကာလအတွင်း ရရှိသည့် အတွေ့အကြုံများကို အခြေခံ၍ အနာဂတ် ကာလတွင် မြန်မာနိုင်ငံ၌ လာရောက်ဆောင်ရွက်မည့် ပိုလန်အဖွဲ့အစည်းများ အတွက် သင့်လျော်မည့် အကြံပြုချက်များ ဖော်ထုတ်ရန် ဖြစ်ပါသည်။ ဤ အင်တာနက် စာမျက်နှာတွင် မရင့်ကျက်သေးသည့် ဒီမိုကရေစီစနစ် စီမံချက်နှင့် အသွင်ကူးပြောင်းမှုဆိုင်ရာ ခေါင်းဆောင်မှု သင်တန်းစီမံချက်တို့နှင့် စပ်လျဉ်းသည့် သတင်း အချက်အလက်များသာ မကဘဲ စီမံချက်များတွင် ပါဝင်ဆောင်ရွက်သူတို့၏ သဘောထား အမြင် သုံးသပ်ချက်များကိုလည်း ဖော်ပြသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။ မိတ်သဟာ အပေါင်းတို့အား “ဗမာပြည်စီမံချက်” နှင့် စဉ်ဆက်မပြတ် ထိတွေ့ ဆောင်ရွက်ရန် အထူးမပင် တိုက်တွန်းလိုပါသည်။ ဤစီမံချက်များကို ပိုလန် သမ္မတနိုင်ငံတော်၊ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပိုလန်ဖွံ့ဖြိုးရေး သဟာယ အစီအစဉ်၏ ဒီမိုကရေစီဖွံ့ဖြိုးရေးထောက်ပံ့မှု အစီအစဉ်က ရန်ပုံငွေ ပူးတွဲ မတည်၍ ဆောင်ရွက်နေခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
“缅甸计划”,这个博客主要分为两个项目，一个是“缅甸：年轻的民主国家”，另外一个是“转型时期的缅甸领袖。 ” 这两个计划的主要目的是对来自缅甸各个地区的年轻的社会活动者进行关于民主，人权以及多元文化背景的教育。
第一个项目，“缅甸计划”和“波兰缅甸团结联盟”进行合作，地点位于缅甸的掸邦（Shan State）。而“转型时期的缅甸领袖”这个项目是和位于若开邦（Arakan State，也叫Rahkine state）的Other Space Foundation一同开展，此项目的目的是激发缅甸的年轻一带投身到他们所在的缅甸的公民社会的建设上去，从而为今后波兰的相关组织在缅甸进行活动创造条件。这个博客不仅能够让读者发现项目本身的魅力，读者更可以从中阅读到由波兰和缅甸参加者所撰写的文章。我们鼓励您对我们的博客进行持续的关注。这两个计划是由波兰共和国外交部的“支持民主”2012年计划资助的。
maungmaungnaing | July 19, 2015 at 4:19 am
this project is very good u activities.
Projekt Birma on Facebook